Na Vegas Nke a Izu na WebTrends Tinye | Martech Zone
Sunday, Eprel 5, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Agaghị m abịa nzukọ niile, mana ndị amara WebTrends na Nkwukọrịta Voce akpọ m ka m gaa ụlọ ọrụ ịde blọgụ na WebTrends Na-eme Nzukọ 2009 Izu a na Las Vegas. WebTrends bụ onye na-eweta ọrụ web nchịkọta na azịza ahịa ọgụgụ isi nke ndị ahịa.
Ọ na-anụ m ọkụ n’obi iwepụta oge Onye mgbasa ozi ohuru ohuru Justin Kistner ịhụ otú òtù anyị nwere ike isi nyere ibe ha aka. Nzukọ a nwere juru n'ọnụ burukwa, gụnyere ndị isi njikwa mgbasa ozi Obama kacha elu ndị ga-ekerịta ihe nzuzo maka ndị na-ege ntị na-ege ntị, itinye aka na mgbasa ozi na nyocha data.
Ọzọkwa, ogbako ahụ na-etinye nke ya netwọk mmekọrịta maka ndị bịara na ndị ọkà okwu iji nọgide na-ekwurịtanụ okwu, ihe m na-ahụbeghị n'oge gara aga na nzukọ ịre ahịa n'ịntanetị mana na-agbakwunye uru na ngwugwu ahụ. N'ezie, enwere Engage '09 Twitter na akaụntụ!
Ọ bụrụ na ị ga-anọ na ihe omume ahụ, maọbụ na Vegas, gbaa mbọ hụ m! Ana m atụ anya ikwu okwu na ihe omume ahụ ma zute ụfọdụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ na naanị m nwere obi ụtọ ịgwa ndị mmadụ okwu n'ịntanetị.
Kedu usoro gị maka Iweghachite Ahịa?
Apr 5, 2009 na 7: 28 PM
Daalụ maka ịkpọtụ aha. Obi dị anyị ụtọ na ị sonyere anyị. Na mgbakwunye na ndị nrụpụta data Obama anyị nwekwara Ian Ayres kwuru na-ekwu okwu banyere ike data na ịkọwapụta etu esi aga ahịa taa. Onwe m, enwere m obi ụtọ na akwụkwọ ya bụ SuperCrunchers ma ana m atụ anya ịnụ ka ọ na-ekwu okwu.
Lee gị ebe ahụ,